Izinhlobo zangaphansi zangaphandle zompheme noma ithala lakho | Bezzia
UMaria vazquez | 07/05/2021 18:00 | Umhlobiso
Izindawo ezingaphandle ziba maphakathi ngalesi sikhathi sonyaka, lapho amazinga okushisa aphakeme esimema ukuba sihlale emgwaqweni. Ukwakha izindawo ezingaphandle ezifinyeleleka nezikahle kuyisihluthulelo sokuzuza kakhulu kulokhu futhi ukukufeza kuqala ngakho khetha i-flooring yangaphandle enhle.
Ukukhetha umgandayo ophendula kahle esimweni sezulu esingesihle sendawo esihlala kuyo kubaluleke kakhulu. Kepha kunjalo ephendula izidingo zethu ezingokoqobo ngokwezindleko, isitayela nokunakekelwa. Ezinye izindlela ezifanele ukuphehla kuvulandi, ithala noma umpheme ziningi, kepha yikuphi okuhle kakhulu kithi?
Ukuhlaziya izimo zezulu kubalulekile ngoba akuzona zonke izinto eziphendula ngendlela efanayo kuzo. Kepha kubalulekile ukuthi ubheke ukuthi yikuphi ukusetshenziswa okuzonikezwa lezi zindawo ezingaphandle nokuthi sizimisele kangakanani ukusebenzela ukunakekelwa kwazo. Abayingcosana izici okufanele uzicabangele:
Uma usucabangile ngalezi zinto, amakhadi amancane esiwalungiselele izinhlobo ezahlukahlukene zangaphansi zangaphandle azokusiza ukhethe okufanelekile kakhulu. Akubona bonke abayikho, kepha babaluleke kakhulu.
1 Itshe lemvelo
2 Izitsha zamatshe zobumba
Itshe lemvelo linjalo enye yezindlela ezithandwa kakhulu futhi iqine ngokwengeziwe ukuvula izindawo ezingaphandle. Phakathi kwezinto ezisetshenziswa kakhulu uzothola amatshe, ama-slabs nama-slabs e-quartzite ne-slate, amelana kakhulu nezinguquko ekushiseni nasemswakeni.
Akunandaba ukuthi ukhetha ini kuzodinga ukunakekelwa okuncane kakhulu. Kodwa-ke, kufanele ukhumbule ukuthi izindleko zizoba phezulu ngoba ngentengo ephezulu yento uqobo kuzofanele ungeze leyo yochwepheshe owenza lo msebenzi.
Buhle: Ukuqina, ukugcinwa okuphansi, nokubukeka kwe-rustic
Ngokumelene: Izindleko eziphezulu
Izitsha zamatshe zobumba
Kunezinto eziningi zobumba ezidizayinelwe ukuklama izindawo ezingaphandle. Izitsha zamatshe zobumba zingenye yezinto ezithandwa kakhulu ngokumelana kwayo nesimo sezulu esingesihle nokuqina kwayo. Futhi i-porcelain stoneware yokuba kakhulu Ukumelana nomswakama ngenxa yokuphakama kwayo okuphansi.
Ngaphandle kwezinzuzo zobuchwepheshe, i-ceramicware yamatshe nayo inezinzuzo eziningi zokuhlobisa. Kuyinto ebonakalayo ikwazi ukulingisa ngokuphelele ukwakheka kwezinto zemvelo njengetshe, imabula, ukugqwala noma ukhuni. Zibuye zethulwe ngezindlela ezahlukahlukene futhi ziqedelwe.
Okwe: Resistance and versatility
Ngokumelene nalokhu: Intengo (uma sikhuluma ngamatshe e-porcelain)
Ukhonkolo ushintshe izwe lomklamo wangaphakathi. Lokhu kwaziswa kungenye yezinto ezithandwa kakhulu ngaphakathi nangaphandle ukwakha izikhala ezinesizotha ngobuhle bezimboni nobesikhathi samanje. Ubuhle, obokugcina, lapho ukungabikho kwamalunga, kungenzeka ukudala izindawo eziqhubekayo, kunikela ikakhulukazi.
Ivalwe kahle, imelana kahle kakhulu nesimo sezulu esingesihle. Uma kuqhathaniswa nezinye izinketho esele sizicabangele, kuyinto eshibhile. Izindleko zayo noma ukunakekelwa kwayo ngeke kukugcine uphapheme.
Sivuna: I-aesthetics yesimanje, izindleko eziphansi kanye nokugcinwa.
Ngokuphikisana: I-aesthetics ebandayo.
Inhlanganisela yinto eyenziwe kabusha futhi evuseleleka engaqhekezi, i-chip, ivuvukale, ibole, noma iguqule umbala. Ayisheleli, imelana kakhulu futhi inikeza ukuqina okuphezulu ngisho nasezimeni ezimbi kakhulu. Akudingi ukunakekelwa futhi isebenzisa isiphetho esifana nesokhuni, ukwazi ukukhetha ezinhlobonhlobo zamathoni nezakhiwo.
Sivuna: ukumelana, ukuqina, intengo nokufakwa
I-Los phansi usajabulela i- ukufunwa okuphezulu ngaphandle kwesondlo abakudingayo ukuhlala usesimweni esihle. Imfudumalo abayiletha ezindaweni ezingaphandle ayinakuphikwa kepha bahlupheka kakhulu uma bevezwa izinguquko ezingazelelwe ekushiseni nasezimeni zomswakama ongaguquki.
Ukuqina kuzoncika kuzo zombili izinhlobo zezinkuni nezimo ezibekwe kuzo nokunakekelwa okuhlinzekwayo. Izinkuni zikaphayini ozothola ezinhlotsheni eziningi ezonga kakhulu, kepha hhayi ezifanele kakhulu. Okufanele kakhulu ukusetshenziswa kwangaphandle yilawa izinkuni ezishisayo njengoTeka noma i-Acacia.
Sivuna: I-aesthetics yemvelo nefudumele
Ukulwa: Ukuqina kanye nesidingo sokugcinwa konyaka.
Yiziphi kulezi zinhlobo zephansi elingaphandle ongalikhethela ithala lakho noma kuvulandi? Khumbula ukuthi akudingeki ukhethe eyodwa kuphela, ungawahlanganisa ukuze uzuze okuhle kakhulu ngakunye kwabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Izinhlobo zangaphansi zangaphandle zompheme noma ithala lakho
Umshini Wokuphefumula Olawulwayo, uhlelo olusebenzayo nolunempilo